Resorts Ski tsara indrindra any Colorado! - ULLER
Ny mieritreritra an'i Colorado dia ny mieritreritra ski, ski ary ski maro hafa! Ary toy ny Ireo tendrombohitra misy vilia voajanahary tsy mampino ary fofon'aina amin'ny ambaratonga rehetra dia mahatalanjona, ary tena irian'ny mpitia ski, ski an-dranomandry ary fanatanjahan-tena hafa.
Alefaso haingana ny tehezanymiditra amin'ny rivotra madio ski any Colorado fahatsapana mahatalanjona izany. Nanjary traikefa notadiavin'ny mpizahatany sy atleta an'arivony mitsidika azy isan-taona izy io mba hahatsapa fihazakazaka adrenalinina tsy manam-paharoa. Ny tendrony, izay avo indrindra amin'ny Rocky Mountains, dia mitovy dika amin'ny traikefa nahafinaritra, izay tokony hiainan'ny mpanao ski rehetra. Vonona hianatra bebe kokoa momba ity toerana ski tsy mampino ity ve ianao? Vakio hatrany ary fantaro hoe manao ahoana ny fiainana ny ski any amin'ny trano fisakafoanana any Colorado!
Tadiavo ireo toeram-piantsonana SKI tsara indrindra eto COLORADO!
Inona no atao hoe Aspen?
Aspen dia tanàna iray izay misy ao amin'ny Pitkin County ao amin'ny fanjakana amerikanina any Colorado, izay nipoitra ho toy ny mkah ny ski taorian'ny ady lehibe II rehefa nipoitra ny Aspen Skiing Company. Nandritra ny taona maro, ity tanàna ity dia nanjary ivon-toerana tena ilaina amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina izay manodidina ny ski, ary koa ny fanatanjahan-tena hafa toy ny snowboarding.
Tahaka ny ahoana ny Aspen?
Ny tanànan'i Aspen dia misy trano fandraisam-bahiny efatra izay, na dia tsy mifamatotra aza, dia mandrafitra ny tanàna iray manontolo ary manao azy ho iray amin'ireo toerana mety indrindra amin'ny fanaovana ski, na inona na inona fari-piainanao. Tsy maninona koa raha tsy avo indrindra ny teti-bolanao, dia hiankina amin'ny ivon-toerana nofidianao hitsidika azy sy ny vanim-potoana halehanao izany. Misy zavatra ho an'ny olona rehetra eto amin'ity tanàna ity!
Ireo mpitsangatsangana manomboka dia azo antoka fa hahita ny toerana sahaza azy ireo ao amin'ny gara 'Buttermilk' sy ny faritra ambany amin'ny gara 'Snowmass'. Ireo izay manana ambaratonga faharoa amin'ny fanaovana ski dia handeha tsara any amin'ny 'Highlands' sy 'Snowmass' any amin'ny faritra ambonimbony kokoa. Fa raha efa lasa skier matihanina manana ambaratonga mandroso ianao dia amporisihinay ianao hisafidy Tendrombohitra AspenTsy afaka mamindra ilay vilia avy amin'ny gara 'Highlands' ianao na izany aza. Fa hiresaka izany rehetra izany amin'ny antsipiriany isika avy eo!
ALARIHO AMINTSIKA IREO FIANGONANA TSARA AO ASPEN!
Tendrombohitra Aspen (Ajax)
The Gara Aspen Mountain io no ivon-toerana ski voalohany teto amin'ity tanàna ity! Hitanay izanyany avaratry ny tanàna, ary mampiavaka azy amin'ny alàlan'ny fanolorana dian-tongotra misy fahasahiranana lehibe ho an'ny manam-pahaizana indrindra. Raha ny tena izy, Tendrombohitra Aspen Izy io dia toeram-pialan-tsasatra ski izay tsy mitanjozotra ho an'ny vao manomboka. Izy io dia vita amin'ny hantsana marobe misy ambaratonga antonony, mandroso ary manam-pahaizana ihany, ary noho izany dia miafara amin'ny maha-ivon-toerana ski mahazatra azy amin'io lafiny io. Tendrombohitra Aspen manana totalin'ny dian-tongotra 76 izay mifandray amin'izy ireo manandratra, ary ny tobiny dia tena akaikin'ny tanàna mihitsy. Fiantsonana mahavariana hijerena ny fahaizanao sy ny fahaizanao!
Aspen - dibera
La tobin'ny dibera, amin'ny lafiny iray, raha tehezana manga sy mena no tena manolotra azy, izany hoe "mora" sy "mpanelanelana", indrindra atoro anao hanomboka amin'ny tontolon'ny fanaovana ski, ampiharo ny fahaizanao ary hankafizanao ny adrenaline rehetra izay fantsona(mpandoka sodina) sy snowparks (vala-panala) Ny famolavolana sy ny fampifanarahana azy dia mahatonga azy io ho ivon-toerana tena mahazatra, miaraka amin'ireo safidy ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy ihany koa. The tobin'ny dibera Hitanay any avaratry ny Aspen Highlands izy io, ary somary ambany ny haavony. Mahafinaritra ho an'ny dia ataon'ny mpianakavy, tsy hadino izany!
Aspen - Tany avo
Any amin'ny Havoana Highland sy Havoana Loge (avaratry ny tanàna), Aspen Highlands Misongadina amin'ny fanolorana ski ambony any an-tendrombohitra miaraka amin'ny tehezana mena sy mainty (tsy atolotra ho an'ny mpanelanelana na ny vao manomboka). Tena mitsidika azy ny mpitaingin-tsoavaly mitady hametraka fanamby amin'ireo tehezan-tany sy lovia voajanahary namboarina ho an'ny fanatanjahantena, ao anatin'izany ny Highland Bowl, ny Bowl Olaimpika ary ny Steeplechase. Raha tena zava-niainana faran'izay mafy dia tsy misy isalasalana fa ity no toerana mety aminao!
Ity resort ski ity, uhita eo akaikin'ny Village Snowmass, Io no lehibe indrindra amin'ny tanàna rehetra eto, ary azo antoka fa iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Aspen rehetra. Izy io dia manana làlana marobe amin'ny loko rehetra amin'ny ambaratonga rehetra. Izany dia mahatonga azy io ho toerana ski mahafinaritra be ho an'ny karazana mpanao ski rehetra, na dia vao manomboka ianao na mitsidika mpiara-miasa sy fianakaviana. Na izany aza, hitanao ihany koa ny tehezan-tendrombohitra avo lenta izay mametraka fanamby ho an'ireo mpanao ski mahay indrindra. The gara snowmass Manolotra rivo-piainana mahafinaritra, safidy trano fandraisam-bahiny tena tsara, trano fisakafoanana ary fivarotana hovidiana. Manana ny zava-drehetra izy io!
Aspen Natao hiteraka traikefa feno sy tsy manam-paharoa momba ny fanaovana ski, izay tena manintona ny mpizahatany. Raha ny marina, ny ski dia eny rehetra eny! Ho fanampin'izay, toerana misy fiantsonana ho an'ny filan'ny mpitsidika rehetra azy io ary koa ny anton-diany (fitsangatsanganana, fianakaviana, tantaram-pitiavana na fianarana). Tsy misy isalasalana, azonao atao ny mitsidika ny gara rehetra, na dia ho fantatrao sahady aza izay mety indrindra aminao sy ny namanao! Ny tena marina dia tsara i Aspen raha manapa-kevitra ny hanao ski amin'ny any ivelany ianao amin'ny fialantsasatra amin'ny ririnina manaraka. Ataovy!
Ao amin'ny tobin'ny tendrombohitra varahina, any andrefan'ny Denver (renivohitr'i Colorado), Tontolo iainana tena tsara no miandry anao, izay ahitan'ny mpizahatany sy ny mponina hetsika maro ao anaty lanezy ankoatry ny fanaovana ski ambony, izay azo zahana amin'ny tehezany maro loko sy haavony rehetra. Any no hahitanao lalana mora 77, mpanelanelana 50 ary sarotra 25 ho an'ny làlambe 152 totalinao. Ny koveta ataon'izy ireo dia ankafizin'ny manam-pahaizana indrindra amin'ny fanatanjahantena, namboarina teo anelanelan'ny tendrombohitra tamin'ny fomba voajanahary, ary namboarina ho fifaliana. ny mpanao ski, miaraka amina làlana marobe azo aleha amin'izy ireo, sady voahitsaka no tsy voahitsaka.
Satria manodidina ny 13 km miala an'i Frisco (ao amin'ny Summit County) no misy azy dia azonao atao ny misafidy safidy amin'ny trano itoeran'ny tanàna akaiky anao. Mikasa ny hampihena ny teti-bolanao ianao mandritra ny dia ataonao. Frisco koa dia manana safidy marobe amin'ny fialam-boly fizahan-tany izay ahitana tranombakoka, faritra fitsangantsanganana ary zaridaina misy lanezy, noho izany dia ho leo ianao amin'ny fotoana fohy. Na izany aza, Toeram-piantsonana Copper Mountain Izy io dia manana toeram-pialamboly manokana, trano fonenana ary trano fisakafoanana izay hamela anao mihoatra ny gaga, haparitaka amin'ny toerana telo: East Village, The Village at Copper ary West Village.
Aza adino ny mandray an-tsaina fa ny haavon'ity gara ity dia manodidina ny 3.000 metatra, noho izany dia tokony hiomana ny handray an'io ianao ary tsy hamela azy hanaisotra ny fahafinaretana amin'ny dianao raha vao manomboka ianao.
La Toeram-piantsonana Winter Park Resort, Miorina ny "Favorite of Colorado" indrindra ho an'ny haavo mandroso sy mandroso amin'ny fanaovana ski, na dia manome safidy mora aza ho an'ny vao manomboka. Ny Winter Park dia napetraka eo akaikin'ny Continental Divide izay manome anao tombony amin'ny fandraisana sy fandraisana ireo tafiotra amin'ny ririnina saika amin'ny lafiny rehetra. Inona no dikan'ity? Ho voafandrika any izy ireo ary hanampy lanezy maro hafa hankafizany ny tehezan-tendrombohitra.
Ny gara, umiorina akaikin'ny Front Range (90 minitra miala an'i Denver), misy izany tampon-tendrombohitra telo (Winter Park, Mary Jane ary Vasquez Ridge) izay mifampiresaka sy mifandray amin'ny alàlan'ny làlambe sy fisondrotana, afaka mandray olona maherin'ny 10.000 isaky ny andro fanaovana ski. Izy io koa dia manana safidy honenana marobe toy ny trano fandraisam-bahiny, hotely ary trano fandraisam-bahiny izay manomboka amin'ny mora indrindra ka hatramin'ny tsara indrindra. Aza gaga raha mahita efitrano sy kabine vitsivitsy miafina ao anaty ala ao ianao afovoan-tanànaRirinina!
Ho fanampin'izany, ho sanda fanampiny, ny gara dia namboarina mba handraisana olona manana karazana fahasembanana ara-batana, izay manana fotoana hianarana ski sy ski an-dranomandry ao amin'ny National Sports Center for People with Disabilities (NSCD).
VAIL (RESY FIASA SKY)
La Toeram-piantsonana Ski Resorts Io no lehibe indrindra amin'ny fanjakana manontolo Colorado ary ny fahatelo lehibe indrindra amin'ny Etazonia manontolo. Hitanay teo akaikin'ny tanànan'i Vail, any Eagle County. Raha manapa-kevitra ny hitsidika ity toeram-pialofana ski ity ianao, dia azo antoka fa izany no izy iray amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra tamin'ny fialan-tsasatra azonao safidiana. Izy io dia manolotra saika ny zava-drehetra ao amin'ireo fizarana telo ao aminy: The Front-Side, Blue Sky Basin, ary Black Bowls. Ny gara dia manana lalana mandroso hatrany amin'ny ambaratonga avo indrindra, ary noho izany antony izany dia mpitsidika ski maro no mitsidika azy, saingy manolotra safidy tena tsara ho an'ireo mpanao ski an-tsehatra mpanelanelana sy vao manomboka izay tsy handiso fanantenana anao na kely aza raha karazana tehezan-tendrombohitra izy ireo.
Ho fanampin'izany, tobim-piantsonana misy tanàna sy tanàna ao amin'ny Vail Valley miaraka amina fomba fanjanahan-tany mahafinaritra tokoa izay azonao antoka fa hofongaranao. Ary ho hitanao fa tena mahavariana ny fitsangantsanganana sy ny fiainana amin'ny alina! Ny zavatra tsara indrindra dia ny mahita safidy am-ponenana an-jatony ianao, ao anatin'izany ny trano fandraisam-bahiny, hotely, trano, kabine ary trano fandraisam-bahiny, izay hifanaraka amin'ny teti-bola sy ny tsiro rehetra noho ny safidy maro karazana, na dia marina aza fa mety ho iray amin'ireo foibe ski lafo vidy indrindra Colorado. Ka raha manana fotoana mety hampiasa vola sy hankafy izany traikefa amin'ny oram-panala izany ianao dia azo antoka fa tsy hanenenanao izany. Raha miaraka a teti-bola voafetra, ny safidinao tsara indrindra dia ny mijanona amin'ny tanàna akaikin'ny gara, izay saika kilometatra vitsivitsy daholo.
Fantatrao ve izany laVail Town mihitsy no natsangana taorian'ny nisokafan'ny toeram-pitsangatsangana tamin'ny 1962? Izany no mahatonga ny tanàna saika mifantoka tanteraka amin'ny fizahan-tany sy ireo mpanao ski mitsidika azy ireo. Ho fanampin'izay, ny Vail Ski Resort Gara miisa 3 hafa no tena mandrafitra azy ary na dia heverina ho mahaleo tena aza dia orinasa Vail Resorts no miasa. Izahay dia mamela anao fanazavana kely momba azy ireo!
El Beaver Creek Resort Hitanay fa 20 minitra avy eo Vail no misy azy, manakaiky ny tanànan'i Avon. Io gara io dia mitovy dika amin'ny rendrarendra amin'ny lafiny rehetra, ary hitantsika fa hita taratra ao amin'ireo fivarotana marika, ireo galeriana kanto hitanao izany rehefa mandeha ianao, ary amin'ny ankapobeny amin'ny habakabaka iray an'ny gara. Izany no mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy hafa mihaja, kanto ary manokana.
Ity foibe fanaovana ski ity dia kely ny habeny raha mampitahantsika izany amin'ny sisa amin'ireo trano fandraisam-bahiny akaiky izy, saingy tsy dia milamina sy malalaka noho izany. Raha ny marina dia manana tendrombohitra ski misy vohitra 3 samihafa izy io. Ataovy ao an-tsaina fa ny ankamaroan'ny làlana atolony dia ho an'ny ambaratonga antonony, na dia manome safidy tsara ho an'ny ambaratonga mandroso sy ho an'ny vao manomboka aza izy. Ary tsy azonao hadinoina ilay lakandranon-dranomandry mahavariana izay mahavariana!
Ny gara Breckenride dia matetika antsoina hoe "Breck" ary misy tampon'isa 5 mandrafitra ny faritany Summit rehetra ao amin'ny Summit County. Io no iray amin'ireo toeram-pitsangantsanganana fitsidihana be mpitsidika indrindra any Etazonia isan-taona. Ary izany traikefa any Breckenridge izany dia manolotra tontolo iainana mety raha tanàna mahafinaritra ianao, miaraka amin'ny toerana hafa azo isafidianana sy ny teti-bola rehetra.
Izy io dia faritra feno lanezy be dia be izay manana hantsana ho an'ny manam-pahaizana, mandroso ary ambaratonga antonony, na dia mahita hantsana ho an'ireo vao manomboka amin'ny sekoly ski aza hianarana ianao. Ho fanampin'izay, afaka mankafy valan-javaboary ianao fomba maimaim-poana Ho an'ny mpitsangatsangana bebe kokoa, miaraka amin'ny boaty sy ny lalamby hikorisa ary hitsambikina amin'ny throttle feno, ary ahafahanao mihazakazaka amina matihanina manao fanazaran-tena amin'ny fifaninanana manaraka.
TOY RESY RESAKA
Ity resort ski tsy mampino ity dia hita ao an-tanànan'i Keystone any amin'ny fanjakan'i Colorado, akaikin'ny Denver. Ny ivony dia misy tendrombohitra 3 mety tsara amin'ny fanaovana ski, indrindra amin'ny hantsana ho an'ny ambaratonga avo lenta sy manam-pahaizana, na dia manome safidy ho an'ny ambaratonga antonony sy fanombohana aza izy. The gara ifaharana mahafinaritra indrindra ny mitsidika andro aman'alina ho an'ny malaza Milomano amin'ny alina (Ski amin'ny alina), satria ny sasany amin'ireo tehezany tsara indrindra dia namboarina manokana amin'ny fanaovana ski amin'ny alina. Tena milay!
Ao amin'ny Keystone Resort dia mahita safidy mahatalanjona koa ianao amin'ny resaka trano fisakafoanana sy fivarotana ho an'ny fiantsenana, ary koa safidy fialofana sy trano fandraisam-bahiny an'arivony izay azo antoka fa mifanaraka amin'ny tsiro sy teti-bolanao. Mialà amin'ny trano mahafinaritra sy mora indrindra, mankany amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano be tendrombohitra sy trano tsy miankina.
Ary koa, ity toerana fialantsasatra any colorado manolotra faritra ho an'ny mitaingina soavaly, zaridaina bisikileta an-tendrombohitra, taranja golf sy habaka golf namboarina hanome fihaonambe. Izy io koa dia misy farihy eo akaiky eo minitra vitsy fotsiny, izay rehefa lasa mangatsiaka dia lasa sisin-dranomandry. Tsy afaka manadino azy ireo ianao!
Fantatra amin'ny anarana hoe "The Basin" na "A-Basin" tsotra fotsiny, ny Fialantsasatra ski Arapahoe Basin dia ao amin'ny White River National Forest any Colorado. Toerana iray namboarina manokana ho an'ny manam-pahaizana indrindra amin'ny fanaovana ski sy ny lanezy, satria ny ankamaroany dia manome hantsana avo lenta. Na izany aza, ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra no ahitanao safidy làlana antonony ary koa ambaratonga mora ho an'ireo vao manomboka sy mianatra, izay mahita sekoly ski mihitsy aza.
Ny iray amin'ireo zavatra tena tia ny gara Basin dia ny ahafahanao manao ski mandra-piandohan'ny volana Jona, izay mety haharitra hatramin'ny Jolay mandritra ny taona vitsivitsy. Izany no antony matetika manokatra varavarana telo volana lava noho ny gara hafa izy.
Raha te-hitsidika azy amin'ny dia manaraka ianao, dia tadidio fa tsy manana toeram-ponenana manokana izy, ary tsy maintsy mijanona ao amin'ny Keystone Resort na amin'ny toeram-ponenana amina tanàna manodidina ny 20 minitra miala ny faritra ski, ohatra Frisco, Silverthorne, Breckenridge ary Dillon.
La tobin'ny loveland akaikin'ny tanànan'i Georgetown ianao izao Colorado, mandrafitra ny Lohasahan'i Loveland sy Loveland Basin fa izy roa ireo Mifandray izy ireo raha tsy mitaingina bus iray fotsiny. The mpitaingina Ny tena faran'izay mafy dia ireo izay mitsidika an'i Loveland indrindra noho ny làlan'ny lanezy 400 '' tsy misy fifamoivoizana sy ny tehezany mideza mivoaka ao anaty lovia (vilia baolina) misokatra. Mety ho be ny lanezy noho ny hitanao any amin'ireo toeram-pisakafoanana ski hafa any Colorado.
Na eo aza izany dia mahita marina ireo mpanao ski vao manomboka Loveland Safidy vitsivitsy mangatsiatsiaka, miaraka amin'ny tehezan-tendrombohitra ihany, saingy tsy dia mideza, indrindra amin'ny faritra Lohasahan'i Loveland. Ity dia iray amin'ireo gara voalohany manokatra ny varavarany amin'ny taona satria manome vanim-potoana manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Mey izy ireo.
Ao amin'ity tanàna ity ianao dia hahita safidy hafa karazana fampiantranoana, miaraka amin'ny safidin'ny hotely tsotra sy trano fandraisam-bahiny mirindra mifanaraka amin'ny fampiononana rehetra. Na dia azonao atao aza ny misafidy ny hahazo trano tsara indrindra ao an-tanànan'i Georgetown.
TADIDIO: Ny vanim-potoanan'ny ski dia eo anelanelan'ny volana Novambra sy aprily, izay volana tsara indrindra hitsidihana ireo trano fandraisam-bahiny any Colorado. Ataovy ao an-tsaina ihany koa fa ny fanaovana ski ambony dia fanatanjahan-tena mampidi-doza ary tsy maintsy mandray ny fepetra fiarovana ilaina rehetra ianao.
Araka ny efa noresahintsika tamin'ny fiandohan'ity bilaogy ity, ny trano fandraisam-bahiny Arapahoe Barin sy Loveland no roa izay misokatra misokatra kokoa noho ny ambiny mandritra ny taona, na dia ny marina aza dia ny fanokafana sy ny famaranana ny fizaran-taona Hiankina amin'ny faritry ny tobim-piantsonana tsirairay izany arakaraka ny toetr'andro. Matetika ny fanapaha-kevitr'izy ireo dia miankina amin'ny habetsaky ny lanezy nilatsaka tamin'io taona io.
INDRINDRA INDRINDRA NY ASA TOKONY AZONAO ATAO ao COLORADO?
Ity tanàna ity dia tsara tarehy, ary feno hetsika fialamboly izay azo antoka fa hameno ny dianao ski, indrindra raha miaraka amin'ny namana sy fianakaviana ianao. Azonao atao ny manararaotra ny dia mba hankafizanao ireo kojakoja hafa ary hampiala sasatra ny vatanao mandritra ny fotoana fohy aorian'ny adrenaline ao anaty lanezy.
Araraoty ny traikefa hafa ao an-tanànan'i Denver sy ny fanjakan'i Colorado amin'ny ankapobeny. Ny sasany amin'ireo hetsika tsara indrindra dia:
The Museum Museum of Science sy ny natiora
Mandehandeha eny amin'ny tendrombohitra ny snowmobile
Ranomandry milomano amin'ny renirano be marefo
Kayaking ao amin'ny Park Confluence
Sambo sambo Washington
Ny Distrika RiNo ART
Pubs sy trano fisakafoanana
Fivoriana fanatanjahantena ekipa eo an-toerana
Ny fitsangatsanganana an-tsambo any Colorado dia mampanantena fahafinaretana faran'izay betsaka, fahafahana sy adrenaline!
Ilay antsoina hoe Fanjakana Centennial, andrefan'ny Etazonia, dia afaka manana afovoan-tany lehibe noho ny haavony sy ny toetr'andro, fa eo anelanelan'ny volana novambra ka hatramin'ny aprily dia mahazo skier an'arivony mitady lozisialy amin'ny vanim-potoana samihafa izy io. atintin'ny lanezy.
Tadidio fa raha hanao dia an-tsambo ianao dia mila miomana lalandava amin'ny hafanana ambany miaraka amin'ireo fitaovana ilaina sy miaraka amin'ny akanjo sahaza azy, na tompony na nohofaina ao amin'ny gara. Ho fanampin'izany, tsy maintsy raisina fa ny fanatanjahan-tena tafahoatra amin'ny lanezy dia mety hampidi-doza. Zava-dehibe ny fahalalana tsara hatrany, ny fiomanana ary ny fitazomana ny toe-tsaina tsara.
Ankehitriny rehefa mahalala bebe kokoa momba ny traikefa fanaovana ski any Colorado ianao, dia afaka misafidy ny vanim-potoana tsara indrindra sy hialana amin'ny filanao. Aza misalasala intsony ary miaina an'ity fitsangatsanganana ity ho anao!
Jereo ny fifaninanana sy ny hetsika ara-panatanjahantena tena tsara indrindra any Eropa sy izao tontolo izao! Betsaka ny fihaonambe fitsangatsanganana an'izao tontolo izao, miainga amin'ny mahatsikaiky sy mahazatra, hatramin'ny mahazatra indrindra,